Ulwazi lwe-Goldendoodle Breed Information, Temperament, Puppies & Izithombe - Izinhlobo
IGoldendoodle iyi umklami uwele phakathi kweGolden Retriever nePoodle.
Zingenye yezinja ezithandwa kakhulu emhlabeni ngoba zine-hypoallergenic, kulula ukuziqeqesha futhi zinobungane.
Lawa ma-teddy-bear amahle njengezinja eza ngemibala nobukhulu obukhulu; kukhona ngisho ama-Goldendoodles amancane !
Le nja ithanda ukuba matasa ngaphandle futhi izokwenza umlingani ophelele womndeni osebenzayo.
Ukulungele ukwamukela le nja enothando futhi ethandekayo?
Qhubeka ufunde ukuze ufunde kabanzi mayelana nalolu hlobo lohlobo, lapho ungathenga khona imidlwane, nokuningi ...
Ukubuka konke kweGoldendoodle
Kungani Sithanda Ama-Goldendoodles
Ibiza Kangakanani I-Goldendoodle Puppy?
Ungakwamukela Kuphi Ukutakulwa Kwe-Goldendoodle?
Usayizi weGoldendoodle nokubukeka
Ngabe amaGoldendoodles Yinja enhle?
Ingabe Ziyizinja Ezinhle Zomndeni?
Iziphi Izinkinga Zezempilo Onazo AmaGoldendoodle?
Ngabe I-Goldendoodles ihlala isikhathi esingakanani?
Umhlahlandlela Wokunakekela (Ukuzilungisa, Ukondla nokuzilolonga)
IGoldendoodles ingumphumela wokukhwelana neGolden Retriever enePoodle esezingeni elilinganiselwe.
Ekuqaleni eyayivela e-Australia, uhlobo lwezinja ze-Goldendoodle lwaqala ukubizwa nge-'Goodle 'futhi abanikazi abaningi bangaphambilini bazolikhumbula ngothando ngaleli gama! Igama leGoldendoodle laqala ukusetshenziswa ngeminyaka yama-1990s ngenkathi izinhlobo zezinja ezingumklami ziqala ukubhebhetheka kakhulu ngeLabradoodle.
AmaGoldendoodle ahlakaniphe kakhulu kanti okunye ukusetshenziswa kwawo kokuqala kwaba njengezinja eziqondisayo zabantu abangaboniyo abanezinto ezingezwani nomzimba. Bona kuchitheka okuncane kakhulu i-dander (i-fluff ewela emajazini amaningi wezinja angadala ukungezwani komzimba), ngakho-ke mancane kakhulu amathuba okuthi ibangele ukungezwani komzimba.
IGoldendoodle yaqala ukukhuliswa njengenja ehambisana nayo ngo-1969 kuMonica Dickens, umzukulu womlobi odumile waseNgilandi uCharles Dickens.
Kodwa-ke, kwaze kwaba yiminyaka engamashumi amabili kamuva ngo-1990 lapho lezi zinja zaziwa khona.
Manje, bayisilwane sasekhaya esidume kakhulu, iminyaka engamashumi amabili selokhu kwatholakala ukuthandwa.
Lezi zinja zithathe imithombo yezokuxhumana ngokuhlasela amanye amaGoldendoodles Abalandeli abangu-500,000 ku-Instagram.
Zidume kakhulu ngoba zihlanganisa okuhle kunakho konke iGolden Retriever nePoodle:
Ihlakaniphe kakhulu futhi kulula ukuyiqeqesha njenge-Poodle.
Ubungane obunobungane nobuthembekile njengeGolden Retriever.
Le nja ivame ukuzola futhi yamukele wonke umuntu, ngakho-ke ibe nezindima eziningi eminyakeni eyi-15 edlule kubandakanya: Ukusesha Nokutakula, Usizo Lwezokwelapha, kanye nomsebenzi Wezokwelapha. Ngenxa yekhono labo lokwenza izindima eziningi, IGoldendoodles iyisengezo esihle emindenini nezingane zeminyaka yonke kanye nemindeni nezinye izinja.
Le nja uhlobo olukhethekile oluhlanganisa izinhlobo ezimbili esezithandwa kakhulu eGolden Retriever nasePoodle - izinja ezi-3 nezine-7 ezaziwa kakhulu eMelika. Banezici eziningi kakhulu kangangokuthi cishe akunakwenzeka ukungathandani:
Inobuhlakani obuhlanganisiwe bePoodle nobukhulu obukhulu beGolden Retriever, okwenza imbaza, inja enobungane.
IGoldendoodle iyi-hypoallergenic ngakho-ke ayichithi ngokulambisa futhi ayibangeli ukungezwani komzimba nabantu abaningi.
Yenza abangane abakhulu njengoba bethanda inkampani futhi bangakha isibopho esiqinile nabanikazi babo.
Ngokuhlanganiswa kwezinhlobo ezimbili ezihlakaniphe kakhulu, kulula ukuziqeqesha. Zisetshenziswe njengezinja eziqondisayo nezinja zokwelapha futhi zinekhono elimangalisayo lokufunda.
Ababheki nje kuphela ngegolide kepha bangaba imisebe yelanga empilweni yakho. Bangamandla amakhulu nezinja ezinempilo, abahlala bejabule ukukubona!
Amakhilogremu angama-40 kuye kwangama-60
Amasentimitha angama-20 kuya kwangu-24
Iminyaka engu-10 kuya kwengu-15
Imidlwane ye-Goldendoodle ivame ukubizwa ngokuthi 'ama-teddy amancane' ngenxa yobukhulu bawo obuncane noboya obugobile.
Njengoba iGoldendoodle ingabhalisiwe yinoma iyiphi ikennel club kungaba nzima ukukwenza thola umfuyi omuhle ukuthenga umdlwane kusuka. Lezi zinja azibonwa amakilabhu kennel yingoba ahlukaniswe ngokweqile ngakho-ke izici zawo azibikezeli kangako kunezinja ezihlanzekile.
Ukugwema ukuthenga ngengozi umdlwane weGoldendoodle emshinini wokugaya umdlwane, qiniseka ukuthi ubuza umfuyi mayelana:
Imiphumela yemiphumela ye-Hip neyendololwane yabo bobabili abazali.
Ukuhlolwa kokuqala kwezinja (uma kungaphezu kwamasonto ayisithupha).
Uhlu lozalo lwabazali bobabili.
Zingaki izibi zangaphambilini idamu ebelinalo.
Uma ungahlangana nomama nemidlwane yakhe.
Kufanele njalo ukhethe umfuyi ongaphendula yonke imibuzo yakho ngokuzethemba.
Gwema abalimi beGoldendoodle abanodoti abaningi futhi bagxile kuphela ekuthengiseni imidlwane yabo ngokushesha.
Ama-litter we-Goldendoodle avame ukusukela emidlwane emi-3 kuye kwayi-8. Akufanele ulindele ukuthatha umdlwane uye nawo ekhaya ngaphambi kwamasonto ayisishiyagalombili ubudala, ngoba bafunda amakhono abalulekile kumama lapho emncane kunalokho.
Funa umdlwane othembekile onesibindi esanele sokuxhumana nawe noma nomndeni wakho.
Intengo yomdlwane weGoldendoodle uzoba phakathi kuka- $ 1,500 no- $ 2,000.
Uma bekhiqizwa kusuka izinja ezibhalisiwe zohlobo lwekennel club kuthi-ke kwesinye isikhathi intengo ingafika ku- $ 2500.
Inani labo eliphakeme lenza kubaluleke kakhulu ukuthi uqiniseke ukuthi uthenga kumfuyi onomthwalo wemfanelo ongazalisi imidlwane ngenhloso yokuthola imali.
Lapho uthenga umdlwane kubalulekile ukuqonda izinhlanganisela ezahlukahlukene zofuzo zeGoldendoodle kanye netemu:
F1 IGolden Retriever Poodle
F1B I-F1 Goldendoodle Poodle NOMA Golden Retriever
F2 I-F1 Goldendoodle
Imidlwane yesizukulwane sokuqala (isb. F1) ayibikezeli kakhulu uma kukhulunywa ngokubukeka nobuntu.
Ama-Goldendoodles avame ukuthengwa ephendula ukuthambekela kwamanje ( noma umnikazi wosaziwayo ) futhi maningi amathuba okuthi ashiywe futhi adinga ukuhlanganiswa kabusha.
Ukutakulwa kweGoldendoodle imvamisa kungama- $ 300 USD.
Uma ungathanda ukwamukela ingane, qala ngokuhlola indawo yakho yokuhlala. Izinhlangano ezinjenge I-DoodleRockRescue Siza ukubuyisela kabusha izinhlobo ezihlanganisiwe ezinjengeGoldendoodle ngakho-ke hlola namawebhusayithi abo.
Bachazwa kangcono njengabakhulu kakhulu teddy amabhere!
IGoldendoodle idabula phakathi kweGolden Retriever nePoodle ngakho-ke kungaba nzima ukubhala phansi ngqo ukuthi izobukeka kanjani.
Inja ngayinye ihlukile njengoba ingekho indinganiso yokuzalanisa.
Yize kungenzeki ukusho ngokuqinisekile ukuthi iGoldendoodle izobukeka kanjani, imvamisa ungazibona ezingubeni zazo ezisontekile nokumamatheka kwazo okujabulisayo.
Ukuhluka okubili okuyinhloko kule nja umbala wayo nengubo yayo:
Akuwona wonke amaGoldendoodle anengubo yePoodle esontekile, kepha iningi lizoba phansi. Izizukulwane zesibili zinamathuba amaningi okukhombisa ijazi le-Poodle elicijile, kepha nokho lokhu kuyi-lottery yezofuzo.
Kufika amaGolden Retrievers ngombala owodwa , kepha iPoodle iza ngezinhlobonhlobo! Lokhu kusho ukuthi imidlwane yeGoldendoodle ingaba: Mnyama, Brown, Cream, Gold, Red noma White
IGoldendoodle esezingeni eliphakathi nendawo iphakathi kwamasentimitha angama-20 nengama-24 ubude futhi inesisindo esingu-40 kuye ku-60lb.
IGoldendoodle ingeza ngosayizi abahlukene ( okujwayelekile nokuncane ) kuya ngokuthi iyiphi Izinhlobonhlobo zePoodle ziye zazalaniswa nazo.
Izinhlobo ezincane zisondele ku-30lb futhi zingama-intshi ayi-16 ubude.
Usayizi wazo ungahluka kakhulu kuye ngosayizi wabazali bawo. Indlela elula yokulinganisa ukuphakama kwenja enqamulelayo ukufaka ukuphakama nesisindo sabazali bese uhlukanisa ngababili ukuthola isilinganiso.
Uma umzali weGolden Retriever enesisindo esingu-65lb kanti umzali wePoodle enesisindo esingu-55lb lapho-intombazane ephelele esekhulile izokala cishe ama-60lb.
Ngaphakathi kukadoti ofanayo wemidlwane yeGoldendoodle, kungenzeka ukuthi kube nemibala eminingi namajazi! Lokhu kunjalo ikakhulukazi ngezizukulwane zangaphambilini (isb. F1). Yize zonke zingabonakala zihlukile, lolu hlobo lusazodonsa iso lakho ngalo ubuso bayo obunobungane!
Imibala yazo isukela kokumhlophe noma okumnyama kwePoodle kuye kokunsundu okwegolide oku-Golden Retriever.
Uhlobo lwejazi luzoqondile ( njengeGold Retriever ) noma ende futhi egobile ( njenge-Poodle ), noma ingxube ye-wavy yalokhu okubili.
Ezimweni eziningi, ijazi lazo ligobile futhi liminyene , kepha kwesinye isikhathi kungaba yinde futhi iqonde njengeRetriever. Zombili lezi zinhlobo zamajazi zingamajazi aphindwe kabili, okusho ukuthi banesidlali esingaphansi esinyene nesidlali esingaphezulu esinciphile.
Lezi zinja zihlelwa njenge-hypoallergenic, ngakho-ke azichithi ngempela.
Uma ucabanga ukusebenzisa iGoldendoodle njengenja yokugada, uzohluleka kabi! Lolu hlobo lungenye yezinja ezinobungane kakhulu ongafisa ukuhlangana nazo futhi kuyathokozisa ukusho ukuthi sawubona cishe kunoma ngubani.
Le nja inobungane futhi iyangeneka. Bazuze ifa lokuzola nelikhululekile ohlangothini lweGolden Retriever lwale nhlanganisela okuyiyo kubenza babe nobungane obukhulu kubo bonke.
OkweGoldendoodle, wonke umuntu ungumngani.
Ijazi labo elimhlophe likakhilimu libenza babukeke bathambile futhi banobuqili, kufana nobuntu babo bokuthamba. Lokhu kuqinisekile yinja eyodwa yokuxuba ethola zonke izici ezinhle kuzo zombili izinhlobo zezinja.
Izici ezivelele kakhulu ukuthi zilangazelele kakhulu ukujabulisa nokuhlangana nezinye izinja eziningi. Lokhu kubalulekile uma usuvele unezilwane ezifuywayo, ikakhulukazi ezinye izinja ekhaya. Ngenxa yemvelo yabo enamandla kakhulu, kuzodingeka babe nokuzivocavoca nsuku zonke okufanele izinga lomsebenzi wabo ukuze bahlale bejabule futhi bephilile.
Le nja ngeke izizwe isongelwa izivakashi zasendlini futhi ngokuvamile ayisihle ukwahlukanisa phakathi kwezimo ezisongelayo nezingasongeli.
Ngoba lolu hlobo lunokuzethemba okukhulu kubantu abasha, baba nobudlelwano obuqinile nomnikazi wabo, kepha lokhu kungadala ukuthi balahlekelwe ukuzethemba uma bengekho kubanikazi babo. Lokhu kwenza ukuthi kubalulekile ukuthi ube nesikhathi esanele sokunikeza lolu hlobo lonke ukunakekela abakudingayo ukuze bahlale bejabule futhi bezethembile.
Abalokothi babe nolaka, futhi noma yiluphi uhlobo lokuziphatha okunolaka kufanele lube yisizathu sokukhathazeka; lokhu akuyona isimo sabo sengqondo. Okungenani, inja yakho ingahle ibonakale ingakhululekile ezimweni, kepha akufanele neze ilume noma ichofoze.
AmaGoldendoodles aneliseke ngokuphelele ukuhlala nokuphumula nabanikazi bawo.
Yebo. Inja le inayo ubuntu obukhulu kubantu abaningi , ikakhulukazi emindenini njengoba kuyaqabukela inolaka noma inzondo. Lezi zinja ziyizilwane ezifuywayo ezimangalisayo zomndeni, ezaziwa ngokubekezela nokuthembeka.
AmaGoldendoodles athanda ukuba matasa futhi avumelane kahle nanoma imuphi umndeni osebenzayo.
Banobungane obukhulu futhi abanandaba ukuthi unendawo ethile ozoba kuyo, bazoba sohlangothini lwakho bakumoyizele.
Le nhlanganisela inamandla okuzwana kahle nabantu abavela kuzo zonke izizinda zempilo, ngaphakathi nangaphandle kwekhaya, kanye nezinye izilwane ezifuywayo zasekhaya uma bezikhona ukuhlangana nabo kusukela ngisemncane.
Yebo. Lolu hlobo luyaziwa ngokuhambisana kwalo nempilo yomndeni.
IGoldendoodle yamukela abantu abasha futhi ihlale ikulungele ukudlala nokunakwa. Futhi bazolile futhi banomusa okusho ukuthi bahlangana kahle nemindeni enezingane ezincane - inqobo nje uma abazali besenganikeza inja yabo isikhathi esanele.
AmaGoldendoodles izinja ezisebenza kakhulu futhi. Benza kahle ikakhulukazi ngomndeni osebenzayo ngubani ongabathatha ngokunyuka njalo, ukuhamba, ukugijima, ngisho nokubhukuda.
Yize le nja izongena kalula emindenini eminingi, inayo i-drive drive. Lokhu kusho ukuthi bangajaha inyamazane uma bevunyelwe ukubaleka ngokukhululeka. Ngakho-ke amakhaya nezinye izilwane ezifuywayo ezincane ( ikakhulukazi amakati ) kungahle kungabi yisinqumo esihle. Uthando lwabo lokuzivocavoca lubenza bangafaneleki kubantu abadala abangayifuni inja ephilayo enjalo.
IGoldendoodle yaziwa ngokuba yizinja ezinempilo futhi ngenhlanhla ithambekele ezimweni ezimbalwa kakhulu zezempilo. Kodwa-ke, inkinga yezempilo eyaziwayo yezinja zabaklami yizifo okwabelwana ngazo noma izifo zofuzo ezinhlotsheni zabazali.
Kokubili i-Golden Retrievers nama-Poodles kungenzeka bathole i-hip futhi kwesinye isikhathi i-elplasia dysplasia. I-Hip Dysplasia kuvame kakhulu ezinhlotsheni ezinkulu futhi kungaba yinkinga yeGoldendoodle. Kubalulekile, uma uyinja yakho isiqedile ukukhula , ukubenza bahlolwe yinhlangano efana ne-Orthopedic Foundation for Animals.
Le nhlanganisela ibuye ibe nezinkinga zamehlo (i-Progressive Retinal Atrophy) nayo engahlolwa ezinhlotsheni zabazali. Ukuhlolwa kwamehlo njalo ngudokotela wezilwane ngakho-ke kubalulekile.
Okokugcina, njenge-Golden Retrievers lolu hlobo lunezindlebe eziphansi ezilenga ezingakhiphi amanzi ngempumelelo njengezinye izinja. Akufanele bavunyelwe ukuhlala bemanzi ngoba lokhu kungakhuthaza izifo. Gcina lokhu engqondweni lapho ugeza noma ubhukuda nenja yakho.
Ungafisa ukufakela i-Goldendoodle yakho umshwalense. Ngokwesilinganiso, izindleko zomshuwalense wezempilo ziphakathi kuka- $ 28 no- $ 42 USD ngenyanga.
AmaGoldendoodle aphila cishe iminyaka eyishumi kuya kwengu-15 kuya ngosayizi wawo. Ngokuvamile izinja ezincane kungenzeka aphile isikhathi eside.
Ukudla okunomsoco, ukuzivocavoca umzimba njalo, nokuvakashela udokotela wezilwane unyaka nonyaka kungasiza ekunciphiseni ubungozi bokugula futhi kuqinisekise impilo ende nenenjabulo ngangokunokwenzeka ngenja yakho.
Lokhu kuhlanganiswa kuyinja enakekelwa kalula.
Lezi zinja ezinobungane zenza kahle kubantu abaningi futhi zingaba yisilwane esiphelele cishe kunoma yimuphi umndeni inqobo nje uma uthanda ukuphuma nokudlala nazo!
Umhlahlandlela ~ 1,200 amakhalori
Njengoba lolu hlobo lukhulu futhi lunamandla, kubalulekile ukubondla ukudla kwezinja ezisezingeni eliphakeme okuzokhipha amandla kancane kancane usuku lonke.
Badinga izinkomishi ezintathu zekhwalithi ephezulu ye-kibble nsuku zonke.
Ngokufanelekile, ukudla kufanele kwehlukaniswe okungenani izingxenye ezimbili nsuku zonke, ukuhlukanisa ukudla abakudlayo.
Ukwehlukanisa ukudla kwabo kuzosiza ukufaka ukwakheka nenqubo empilweni yenja yakho, futhi kusiza futhi ukuvimbela ukuqunjelwa (okusho iGastric Torsion) njengoba lokhu kujwayelekile eGolden Retrievers.
Ukuzivocavoca Okuthandayo Landa
Le nja ithanda ukuphuma iye kokunye ukuzivocavoca inqobo nje uma inesikhala sokugijima nokudlala. Bazozama noma yini entsha futhi baziwa ngokujabulela ukugijima, ukubhukuda, nokulanda!
Inja edlala kakhulu, bayakujabulela ukuxosha ibhola noma i-frisbee inqobo nje uma uzimisele ukuyiphonsa.
Kungaba umqondo omuhle ukukhuthaza inja yakho ukuthi ibhukude ezindaweni lapho kuphephe khona. Lokhu kuzosiza ukuhambisa ifa labo leGolden Retriever.
Ziyasebenza kakhulu futhi zidinga umnikazi ongakwazi ukuqhubeka nazo. Ngokwesilinganiso, lezi zinja zidinga nxazonke Ukuzivocavoca amamayela ayi-12 ngesonto.
Ekugcineni, bathanda ngaphandle futhi badinga imizuzu engaba ngu-60 yokuzivocavoca umzimba nsuku zonke.
Lolu hlobo luvame ukukhethwa njengenja yensizakalo noma yokwelapha ngenxa yemvelo eqeqeshwe kakhulu. Kuyafaneleka ukucabanga ukuthi yizinhlobo eziphelele zabanikazi bokuqala bokuziqeqesha. Bathanda ukufunda futhi bathola injabulo enkulu kusuka ejabulisa abanikazi bawo .
Bobabili abazali babo bahlakaniphe kakhulu futhi okuhle okuhle = ngokwemvelo futhi, okwenza lokhu kuhlangana kube kuhle kakhulu ekuqeqesheni.
Uma kukhulunywa ngokuqeqeshwa, sebenzisa ukuqiniswa okuningi okuhle ukubasiza bafunde. Lokhu kuzoholela enjeni ejabule ezimisele ukufunda futhi ezokwazi ukwenza kalula amaqhinga amaningi njengokugoqa, phansi, nokuhlala!
Ukuzilungisa kuzohluka kuye ngokuthi iyiphi inja oyizuza njengefa. Zombili lezi zinhlobo zejazi zizodinga ukuxubha njalo, kepha ijazi le-Poodle elijiyile lizodinga ukuxubha nsuku zonke ukuvimbela ukumila. Ukuxubha kanye ngosuku ngebhulashi elithambile kwanele. Ngenkathi ubrasha hlola izindlebe zabo ukuthola izimpawu zokutheleleka, ikakhulukazi uma inja yakho iyabhukuda elisebenzayo.
Womabili la majazi akhula ngokuqhubekayo, ngakho ukugunda izinwele izodingeka njalo emavikini ayisishiyagalombili kuya kwayishumi nambili. Njengoba le nja iyi-hypoallergenic ungakhetha ukusika izinwele okude noma okufushane ngaphandle kokukhathazeka ukuthi ijazi elide lizobangela ukungezwani komzimba. Kwabahlanza, cela ukuthi izinzipho zabo zigundiwe nazo.
Kufanele uqale ukulungisa inja yakho kusenesikhathi, lokhu kuzovumela inja yakho ukuthi ijwayele ukuphathwa.
Uma ufuna ukuqedela ikhaya lakho ngenja edlalayo, esebenzayo nenobungane lolu hlobo luphelele kuwe. Banomusa, banesineke futhi banobumnene, baphelele kunoma ngubani ofuna inja yomndeni esebenzayo.
IGoldendoodle iyi inja efana nezinye njengoba eyi-hypoallergenic, ehlakaniphile (okwenza kube lula ukuyiqeqesha), futhi abe nesimo sengqondo sesineke. Zolile futhi zinobungani nazo, zizwana kahle nezingane ezincane nezinye izinja.
Ngaphambi kokutholwa qiniseka ukuthi ungazibophezela kwizidingo zabo zokuvivinya umzimba futhi uzoba nenja ethandekayo ekwazi ukuthanda wonke umuntu emndenini.
Unayo i-Goldendoodle vele? Ucabanga ngokuthola eyodwa? Sishiyele amazwana ngezansi.
Imibuzo Evame Ukubuzwa yeGoldendoodle
Q: Iyini inja ezalela i-Goldendoodle yokuxuba?
IMP: IGoldendoodle iyinja ehlanganisiwe. I-retriever yegolide ne-poodle kudalwa ndawonye ukwenza iGoldendoodle.
Q: Uyini umehluko phakathi kwesizukulwane sokuqala iGoldendoodle nesizukulwane sesibili iGoldendoodle?
IMP: Isizukulwane sokuqala iGoldendoodle umdlwane owazalwa nge-retriever yegolide kanye ne-poodle ejwayelekile. Le midlwane ilungele imindeni ene-allergies njengoba ichitha kancane, noma cha.
Isizukulwane sesibili iGoldendoodle yisizukulwane sokuqala seGoldendoodle esikhuliswe nge-poodle. Lezi zinja nazo zinconyelwa kakhulu emindenini enenkinga yokungezwani komzimba nezinto ezithile njengoba kungavamisile ukuthi ilahle ijazi layo. Ungaba futhi nesizukulwane sesibili seGoldendoodles ezikhuliswe ndawonye.
Q: Ngabe iGoldendoodle yami izosinda kangakanani njengoba sengimdala?
IMP: Uma ufuna ukwazi ukuthi imbungulu yakho yeGoldendoodle izokala kangakanani uma ifinyelela ebudaleni, kufanele ungeze isisindo sikamama nobaba ndawonye bese usihlukanisa ngababili ukuthola ukubikezela.
Q: Kufanele ngithole iGoldendoodle uma ngihlala edolobheni?
IMP: Yebo, ungatshala iGoldendoodle edolobheni nasemaphandleni. Vele uqiniseke ukuthi bathola ukuzivocavoca umzimba okwanele ukuze bahlale bejabule futhi bephilile.
Q: Ingabe i-Goldendoodles isondlo esiphansi?
A: Yebo, kunjalo. Ijazi labo lisezingeni eliphansi kakhulu futhi alidingi ukusikwa noma ukusikiwa; kodwa-ke, kufanele uxubha ingubo yabo nsuku zonke ukuvimbela ukumila nokuhlangana.
Q: Ngabe i-Goldendoodles iqala ukwehlisa iminyaka emingaki?
IMP: Imidlwane ingumsebenzi onzima, empeleni, ingaba nzima njengokuthola umntwana! Kepha ungakhathazeki uma i-pup yakho incane ngakolunye uhlangothi, izoqala ukwehlisa umoya phakathi kweminyaka yobudala eyi-8 kuye kwezingu-15 ubudala.
Q: Ingabe abahlafunayo beGoldendoodles?
A: Yebo, amaGoldendoodles ahlafuna izinto ukukhulula ukucindezeleka. Uma i-Goldendoodle yakho endala ihlafuna ngaphezu kokujwayelekile, kungenzeka ukuthi kukhona okubahluphayo. Imidlwane yeGoldendoodle izohlafuna izinto ukukhulula ukungakhululeki kwamazinyo, ngakho-ke kufanele uhlale unethoyizi elihlafunwayo elibazungezile!
Q: Iyini impilo yeGoldendoodle?
Q: Ama-Goldendoodle aphila aze afike eminyakeni eyi-10 futhi kwesinye isikhathi aze abe neminyaka eyi-15. Qiniseka ukuthi uhambisa i-pup yakho ekuvakasheni okuvamile okunempilo futhi ubanikeze ukuzivocavoca abakudingayo ukuwagcina esesimweni esiphezulu.
amagama ezinja ezimhlophe kwabesilisa
enza amakhulu kangakanani ama-pomapoo
amagama amahle e-puppy chihuahua
izinja ezincane zinamazinyo amangaki
uhhafu husky uhhafu pomeranian puppy